Taliska Ciidanka xoogga oo War kasoo saarey dagaalka duleedka Beledweyne – Radio Baidoa
Taliska Ciidanka xoogga oo War kasoo saarey dagaalka duleedka Beledweyne
Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgal ay Ciidanka dowladda ka fuliyeen deegaan duleedka Galbeed kaxiga Magaalada Beledweyne ay ku dileen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalka oo markii dambe dagaal toos ah isku bedelay ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Biitaale oo u dhow deegaanka Luuq Jeeelow,waxaana la sheegay in uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Abaanduulaha Qeybta 27aad Ciidanka Xoogga Jeneraal Saalax Yacquub oo Warbaahinta Dkula hadlay Beledweyne ayaa sheegay innay dagaalkaas ku dileen laba Xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab halka Ciidanka Dowladda ay ka dhaacmeen laba askari,sidoo kalena ay Al-Shabaab hub dagaalka uga furteen.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay Ciidamada howlgalka fuliyeen,kadib markii ay ka warheleen in Xubno katirsan Al-Shabaab ay dhaq dhaqaaqyo ka wadaan deegaannada duleedka ka ah Beledweyne,waxaana uu sheegay inay weli howlgalka wadaan.
Guddoomiyaha G/Hiiraan oo gaarey Buulo Burde & u jeedka oo la shaaciyey
Baarlamaanka Jubbaland oo u codeeyey Codsi uga yimid Axmed Madoobe